Ibsa Koree Jidduu Kallacha Walabummaa Oromiyaa ( KWO) -
Ibsa Koree Jidduu Kallacha Walabummaa Oromiyaa ( KWO)
KALLACHA WOLABUMMAA OROMIYA FRONT FOR INDEPENDENCE OF OROMIA
LakK: kwo – 052B-2016 REF.NO : oif-052B-2016
Guyyaa : Hag. 23, 2016 Date : Aug. 23, 2016
Dhimma Jaarmayaa irratti:
Koreen Jidduu Kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO) walgahii Hagayya 21, 2016 godhate
milkiin xumuratee jira. Gabaasa Koree Huji Raawwachiiftuutiin dhiyaate erga caqaseen booda,
haala yerootii fi dalagaawwan fuula duraa irratti, marii fi xiinxala baldhaa taasiseera. Walgahii
kana wanti adda isa godhe, yeroo ummanni Oromoo gaafii dimokraasii, haqaa, mirga siyaasaa fi
mirga abbaa biyyummaa finiinsuun, gulantaa murteessaa irra geessetti ta’uu isaati. Qaamni
hoggana KWO kun, xumura walgeettii kanaa irratti, ejjannoolee armaan gadii dabarfatuun
walgeettii isaa injifannoon fixatee jira.
Mormii/Fincila Ummata Oromoo laalchisee:
Kallachi Walabummaa Oromiyaa (KWO) gocha diinummaa humni bicuun Woyyaanee TPLF,
tan impaayera Toophiyaa bulchaa jirtu, ummata Oromoo irratti yeroo ammaa kana raawwachaa
jirtu hadheeffatee balaaleffata, humna qabu maraanis afoo dhaabbata.Ummanni Oromootii fi
saboonni cunqurfamoon impaayera kana keessa jiraatan eenyummaa fi mirgaa isaanii erga
gaaffachuu jalqabnii kunoo ar’a woggoota 25 lakkaawwateera. Warraaqsi diddaa gabrummaa
ummanni Oromoo baatiilee saglan dabran keessaa uduu addaan hinkutin ofaa jiru, murannoon
mirga abbaa biyyummaa (walabummaa) goonfachuu kan yeroo kammiyyuu caalatti sadarkaa ol-
aanaa irra gayuu isaa mirkaneessa.
Akka heera addunyaatti (UN), Oromoon miga Hawaasumaa fi Siyaasaa gutuu – guututti qaba.
Sirni gita bittuu Tigree (TPLF), heera UN kana jalatti akka bultuu fi kabajjitu fakkeessuudhaaf
heera mootummaa Tophiyaa keessatti mirkaneessiteerti. Heera UN kana irratti hundaayuuudhaan
ummanni Oromoo daanga tokko malee mirga HIREE ISAA UFIIN MURTEEFFACHUU
HANGA FOTTOQIINSAATTI qaba.
KWOn ijjannaa Ummanni Oromoo mirga bilisummaatii fi walabummaa biyya isaa, akkasumas
mirga mootummaa birmaduu mataa isaa ijaaratee gammachuun akkuma lammiiwwan addunyaa
biroo keesa jiraatu qaba jedhu hordofa.
Mootummaan TPLF ummata Oromoo dhiiga jigsutti mootummoota asiin dura impaayera
Toophiyaa bulchaa turaniin kan wol-gituu miti. Gochi gara-jabeennaa isaan ummata Oromoo
irratti raawwataa jiran, kan amaloota sanyii duguuggaattiin beekaman hunda guutudha. Duulli
xuruuriinsa sanyii kun bara dheeraaf irratti raawwatamus Oromoon otuu hin jilbiiffatin, alagaan
bitamuu fi qabeenya saamamuu, lafa abbaa isaa dhaalamuu, biyya ufii irratti alagoomee
salphachuu jalaa ba’uf sodaa tokko malee, harka qullaa, finqilee kallattii maraan ka’ee jira.
Tarkaanfiin goottumaa dargaggoonni Oromoo ji’oota saglan dabran kana keeysa diinaa fi firattis
agarsiisan kuni, bilisummaan Saba Oromootii fi walabummaan Oromiyaa fagoo akka nurraa hin
jirre ifatti raggaasisee jira. Dhugaan kun dhiiga dargaggota Oromootiin mallataa’ee , lafee
isaniitiin ijaarameera: Kaayoon KWO wareegama kana firii itti godhuun sirna koloneeffataa
Toophiyaa diigee Ripublika Gadaa Oromiyaa tan ilmi namaa hundi nagayaan keessa jiraatu
Gamtoominna ADO (ODF) fi AG7 (PG7) laalchisee:
Sabni Oromoo diina koloneefataa isa qabate mooyachuu fi Oromiya bilisa taate ijaaruu kan
dandayu duudhaa (ideology) dabaa habashaa irraa adda kan ta’e sabboonummaa Oromoo
jabeessuu fi babal’isuudhani. Haa ta’u garuu , namoonni tokko-tokko faallaa sabbonummaa
Oromoo hojjachuun gahee sabboonummaa Oromoo laamshessu taphachuun halagatti harka
kenachuu , abdii kutannaa fi adunyaa biratti uf fakkeessuuf yoo carraaqan argina.
Ummanni Oromoo otuu diinaaf hin jilbiiffatin koloni habashaa jalaa ba’uf waldhaansoo isaa
cimsee itti fufus , namootiin kun injiffannoolee waldhaansoo wareegama ol’aanaa gafateen
argaman kanneen doomsuuf tattaaffii yeroo godhan mul’atu. Namoonni kun kaayoo saba
Oromoo kana galii isaa, bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa hanqisuuf yoo qaamota
halagaa addaa waliin hariiroo tolfatan argina. Ammaan dura jaarraa 20faa keessaatti TPLF tti
heeruman; ar’a ammoo barii jaarraa 21ffaa keessatti worroota jibbansa Oromoo qabanii fi
olaantummaa Saba Amharaa deebisuuf qabsaawan kan akka Patriotic Ginbot -7 (PG7) waliin
harriiroo uumachuun isaanii waan nama qaanesuudha.
Haaluma kanaan dhaabni Adda Dimokraatawaa Oromoo kan Obboo Leencoo Lataatiin
hoogganamu wal-hubannaa dhiheenya kana dhaabotii Oromoo afur waliin irra gayame irra
ijjachuudhaan dhaaba halagaa ka mirga hiree murteefannaa sabootaatti hin amanne, ka sirna
federaalaa kan sabummaa irratti hundaaye hin fudhanne, kan Toophiyaa dullattii deebisee
ijaaruuf qabsaayu waliin tumsa tolfatee jira. ADOn rakkoon saboota cunqurfamoo sirna kolonii
habashootaa jalatti kufanii kan hiikamuu dandayu sirna koloneeffataa diiguu qofaan akka taye
dagachuun yookaan beekaa fudhachuu diduudhaan dogoggora seenaa kana raawwachuun isaa
hedduu nu gaddisiisee jira. Haata’u malee, bilisummaa fi walabummaan Saba Oromoo fi Saboota
cunqurfamoo sirna kolonii habashootaa jalatti jaarraa tokkoo oliif dararamaa jiran, yeroon itti
mirkanaawu fagoo miti jenna. Wareegamni kafalamaa jiruu fi uf durattis kafalamuuf taa’u
ulfaataa ta’ullee Sabni keenya murannoo fi tokkummaadhan qabsoo isaa yoo itti fufe injifannoon
kan Saba keenya akka ta’u shakkii hin qabnu.
Qabsoo bilisummaa fi walabummaa Saba kamiituu keessatti diina alaa dhufee nama qabatu
caalaa ka qabsoo ummataa miidhu lootee galtuu keessaan ergaa/kaayoo diinaa raawwachiisan
akka ta’e seenan ni addeessa. Kanaaf, sabbontonni dhugaa yeroo hunda “Jeedalloo kaldhoo
hoolaa” uffattee deemtu damaqinnaan ufirraa eegu fi gochaa isaanii saaxiluu qabu. Akka
Preezidaantiin Ameerikaa duraani, John F. Kennedy yeroo tokko jedhe-”dogoggorri yoo namni
hin sirreesin dogoggora tayee hafa”. Rakkoon akkanaa yeroo hedduu moonaa qabsoo bilisummaa
Oromoo keessatti dedebi’ee kan raawwatame ta’ullee hogganootiin dhaabaatii fi hawaasni
keennallee dogoggora dabre irraa barannee sirreeffachuu hin dandeenye.
Kanaaf, Kallachi Walabummaa Oromiyaa (KWOn) tokkummaa dhaaba ADO/ODF fi Patriotic
Ginbot-7 jidutti ta’e ni balaaleffata; miseensonnii fi deegartonni dhaabichaa tarkaanfii
dogoggoraa hogganni ADO fudhate kana irraa akka gara moonaa Oromootti deebi’u dhiibbaa
barbaachisu akka godhan waamicha dabarsaaf.
Qabsoo Karaa Nagahaa irratti:
Seenaa qabsoo keessatti, yeroon waldhaansoon karaa nagahaa humna jabaa ta’ee firii argamsiise
heddutu jira. Haata’uu malee, yeroo hunda, worraaqsa karaa nagahaa duuba irkoo qabsoo
hidhannoo qindaawatu jira. Akka qabsaawaan bilisummaa biyya Zaambiyaa, kan booddee
preezidaantii biyyattii ta’e, Kenneth Kaunda, jedhetti “ haga gaafa qabsoon teenya karaa nagahaa
irraa gara humnaatti geeddaramtuutti koloneeffattoonni nama kolfaa nagodhatanii turan, eega
irree teenna arganiin booda, sagalee dhugaa tayee ol-baye, jarri duraan natti koflaa turan akka
dubbataa isaanii tayu na worwaachuu eegalan”, Nelson Mandela ANC (Koongresii Biyyoleessa
Afrikaa) keessatti qabsoo hidhannotti faaydamee jira. Martin Luther King, seenaa qabsoo
gurraacha Ameerikaa keessatti kabajaa kan horate, haga Malcolm X magaalaalee Ameerikaa
keessatti qabsoo humnaa eegaledha.
KWOn mormiin ummanni Oromoo gola hundaa kaase abdii bilisummaa Saboota cunqurfamoo
bittaa sirna TPLF jala jiran hundaaf tayee jira jedhee amana. Sirni nama nyaataan Oromoota
1000 ol ta’an ajjeesee, kumaatamaan hidhee, kumaa fi kitilaan lafa isaa irraa buqqisee,
dubartootaa fi daa’immaan osoo hin hafin dararaa irraan gahaa jiraatullee ummanni keenya
gootummaa fi murannoo addunyaan dinqisiifattuun dura dhaabachaa arma gahee jira.
Hoogganoota dhaaba karaa nagahaantiin qabsaawan kan akka Obbo Baqqalaa Garbaa hidhee
dararaa jira. Kun hundi karoora mootummaan TPLF sanyii Oromoo dhabamsiisuu, Saba Oromoo
qabeennaa fi siyaasaa irraa moggeesuun Oromiyaa kolonii jalatti hambisuuf kaayate dha.
Mootummaan kun sirna ilmaan Oromoo, qe’ee isaanii irratti, karaa gubbatti akka ilmoo
bineensaa rasaasan akaayu. Kun hundi tayee Ummanni keenya qabsoo karaa nagayaatiif carraa
guddaa keennee jira, wareegama hagana hin jedhamnes itti baasee jira.
KWOn mootummaa koloneeffataa hiriiraa fi fincila qofaan kuffisuun hin dandayamu jedhee
amana. Mootummaa gabroomfataa finqila ummataa qawween cabsuu murteeffate, harka duwwaa
afoo dhaabachuun sanyii duguuggaatti nama geeysa waan tayeef, ummata Oromoo waliin
tayuudhaan KWOn humna diina kana garqii godhu uumudhaaf hojjachaa jira; humna
qawweedhaan diina falmee, kufee kuffisu, finqilla ummataa waliin wal-laddaya qabsaayu
Oromiyaa keeysatti gadi dhaabuudhaaf halkanii guyyaa hojjachaa jirra. Kanaaf, Sabnni keenya
akka nu bira dhaabatu waamicha lammummaa goonaaf.
Dhimma Tokkummaa Humnoota Siyaasaa Oromoo irratti:
Sabboontonni Oromoo dhaabota Oromoo adda addaa jalatti ijaaramanii yookiin akka gurmuutti
kurfaayanii qabsoo hadhaayaa geggeeysaa jiraachuun ifaadha. Galiin humnoota kanaatis
bilisummaa Oromoo fi abbaa biyyummaa Saba Oromoo mirkaneessudhaaf akka tayes
Kallachi Walabummaa Oromiyaa (KWOn) tokkummaa humnoota Oromoo dhugoomsuuf
dhaabotaa fi humnoota kaayoo bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti amanan hunda waliin
hojjachaa as gahe. Uf durallee hojjachuuf qophiidha. Dhaabotaa fi humnootin Oromoo akka
amma jiranitti qophaa qophatti qabsaayanii fedhii ummata keennaa guutumaan guututti galmaan
gahuun hinjabaata. Oromoon akka maatii guddaa tokkotti, bakka takkaa, yoo diina isaa irratti
duule malee, humna faffaca’een waldhaansoo dhiibuun bara gabrummaa nurratti dheeressuu
malee, galii hawwinuttiin nudhaquu hindanda’u.
Kanaaf, KWOn dhaabotii fi humnootin Oromoo kan bilisummaa Saba Oromoo fi Walabummaa
Oromiyaatti amanan garagarummaa nu jidduu jiru dhiphisuun hatattamaan tokkummaa kaayoo
uumachuun Ummata keenya kan dhumaa jiru bira akka dhaabannu waamicha hatattamaa
Waamicha Mootummoota Addunyaatiif:
Mootummaan gita bittuun Tigree (TPLF), sababa “Duula shororkeessummaa irratti,” jedhuun
gargaasa biyyoota dhiyaa irraa argatuun, qabeenya guddaa, waraana Afrikaa keeysatti jabina
qabu, humna tikaa cimaa ummata keenyaan fixu tolfatee jira. Waggoota 20 dabarran keeysatti,
USA calla irraa, doolaara Biliyoona 40 ol maqaa gargaarsatiin argatee jira. Falmattonni haqa
Oromootii fi dhabbileen mirga dhala namaa miidhaa mootummaan wayyanee ummata Oromootii
fi ummatoota cunqurfamoota impaayericha keeysa jiran hunda irratti geeysaa jiran irra
deddeebisanii kan ibsan tayullee mootummaan USA fi Awurooppaa ammallee mootummaa
cubbamaa kana gargaaraa irraa hinqoorsine.
Gamtaan Awurooppaatii fi USA, mootummaan wayyaanee ummata silaa nagaha isaa tiksuu qabu
shororkeessaa akka jiru osoo argan ibsa “ haalli Toophiyaa keeysa jiru nu yaachisee jira”
jedhuun ala haga ammaatti tarkaanfii qabatamaa tokkollee hin fudhanne. Booyichaa ummata
cunqurfamee irraa gurra cufachuun, warra dhihaa irrattis boru miidhaa akka qabu beekamaadha.
Bu’aa isaanii dhaabbataan karaa kanaan eeggamuu akka hin dandeenye hubachuudha qabu.
Haalli Toophiyaan keessa jirtu, bombii yeroo eeggattee dhooyu irra ta’aa akka jirtu warreen
dhihaa kan mootummaa bulguu cinaa dhaabatan hundi beekuu qabu.
Kanaaf, dhaabni keenya, KWOn, mootummoota gamtoomanii (UN), EU fi USAn balaa ummata
keenya irra gahaa jiru ilaalchisee tarkaanfii qabatamaa akka fudhatan waamicha godha.
Dhimma Sabaa fi Sab-lammoota, akkasumas Ummatoota biroo irratti:
KWOn adeemsa sirna kolonii hundeen buqqisuun, sirna mirga dhala namaa kan uumamaa,
bilisummaa fi walabummaa ummattotaa, jireenya kabajaa sabaa fi sab-lammii yookiin
ummatoota biroo hunda kabachiifatee biyya isaa irra jiraachuuti hordofa. Kun Ummata biyyattii
keeysa jiraatu hundaaf mirga dhalootaan gonfatan jedhees amana.
Kanaaf, KWOn qabsoo Sabaa fi Sab-lammiin biyyatti mirga hiree ufii ufiin murteeffachuudhaaf
geegeysu kamuu ni deegara. Gochaa abaaramaa mootummaan wayyaanee waggoota 25 dabran
keeyssatti mmata Gaambellaa, ummata Ogaadeen, ummata Amaaraatii fi as dhihoo kana ummata
Walqaayit Tsagadee irratti raawwate cimsee balaaleffata, karaa isaa aanjawe hundaan KWOn
Previous My bit on Obbo Leencoo and Professor Birhanu’s unholy union
Next Yaadanoo Ebbisa Addunya (30.8.2016)